Shirkaan micnihiisu waa gumeysi halaqaato
Qaabka Loo Qoro warka, Faallada iyo Ra'yiga Guji
Yoonis Aadan (Cigalley)
Shirakaan ujeedadiisu waxey tahay in beesha caalamka ladhaho beelihii soomaaliyeed ayaa shirey weyna hishiiyeen kadibna waxey ansixiyeen in Itoobiya ay dalka xasilisey amnina kusoo dabaashey saasna uu baarlamaanka ku ogolaado maadaama ay metelaan beelaha. waxaana kuxigi doono in soomaaliya ay kamid tahay federaalka Itoobiya., mana lahubo in uu dhacaayo shirkaan oo maalmo yar ay inagaxigaan wakhtiga loo qabtey inuu qabsoomo ama dhaco, laakiin haduu dhaco waa in la ansixiyaa qodobkaan ay soomaaliya kula midoobeyso Itoobiya..
Cali Mahdi maku fiicno in uu dhaho shir dib u hishiisiin ayaan qabaneynaa iyadoo dalkii ay heysato Tigreey dadkiina la leynaayo oo la dhacaayo lana barakicinaayo, weliba lagu sameynaayo bahdil kusaleysan hab diineed, bal fiiri Jameeco dhan ayaa laga kaxeestey Masaajid.
Hadaba sideen ku yeeleynaa in aan Tigreey hoos fadhiisano isagoo waardiyo naga haayo oo nala ilaalinaayo, ilama ahan in qof Soomaali oo Muslimnimo sheeganaayo oo damiir wadaninimo ay ku jirto in uu hoos fadhiisanaayo Tigreey.
Dadka moodo in Itoobiya wanaag ukeeneyso Soomaaliya, waxaa tusaale noogu filan dhulka Soomaalida ay heysato wax ma uqabatey? Nabada ay ukeeni weysey, cadaalada ay ukeeni weysey, horumarka ay ukeeni weysey miyey Soomaaliya ukeenee, qofka bini aadamka waa inuu xisaabtamaa.
Cali Mahdi sow maahan ninkii badaha suntan ku shubay oo dalkii iibsadey, Cabdulaahi Yuusufna sow maahan ninkii ugu horeeyey ee ugalo Amxaaro, sow maahan ninkii Balanballe iyo Galdogob ka taagey calanka Itoobiya, sow maahan ninka dalka soo galiyey cadowga soo jireenka ah. Hadaba hadii la yiri labadaan daba dhilif ayaa wax hishiisiinaayo taas micnaheedu waxey tahay yaan la hishiin.
Cabdulaahi yuusuf iyo Cali mahdi hadafkoodu waa sidii ay ukala dili lahaayeen dadka ka soo horjeedo gumeysiga geyigeena qabsadey.
Xaaji Cabdi Iimaan waa nin oday ah waxaana umaleynaa in shirkaan lagu sigsaagey oo lagu marin habaabiyey, waana ayaan daro in nin oday ah oo shalay loo xirey mabda uu aaminsanaay ee gumeysi diid ah, uuna kuhelay mansab iyo magac in uu is bedelo!!.
Hadii xaajiga si hoose loola hadley iyo intii kaloo soo raacikarto ma ahan in la yiraahdo Hawiyaa udhamaay shirkii lagu qabtey Hotel Lafaweyne.
Waxaa cadaatey in 16 kii sano ee lasoo dhaafey waxa naloo fiirsanaayey wexey eheed in nalaga helo dad badan oo inaga mid ah oo la shaqeeya gumeysiga, waa geeri in Itoobiya guushii ay dooneysey ay maanta dad soomaali daba dhilif ah ay siiyaan, waana ayaandaro in Itoobiya calankeeda ay ka taagto Caasimadii Soomaaliya.!!!
Hadaba sabata loogu qabanaayo shirkaan Muqdisho loogana dhigey mid beeleed waa in aysan ka soo qeyb gelin mucaaradka ka soo horjeedo kooxda Imbagathi ha ahaadeen maxkamadaha , baarlamaanka xorta ah, aqoonyahanka iyo siyaasisiin culeeskooda siyaasadeed aan la iska indha tiri kerin. Hadii laga dhigo mid siyaasadeed wexey ka cabsanaayaan in ay soo baxaan axsaab cusub, suuqa siyaasadana ay ka baxaan qaar badan oo ka mid ah kooxdaan Imbagathi ee dabadhilifka ah waana taas sabata ay u isticmaalen siyaasadaan foosha xun si aysan usoo noqon aqoonyahanka iyo indheergaradka shirkana ay ugu yeereen shir beeleedl. Ayagoo kala gadaayo beelaha kuna abuuraayaan colaad, shaki iyo is aamindaro. si ay u gaaraan danahooda guracan.
Kooxda Imbagathi khilaafka ka jiro soomaaliya ayey qeyb katahay welibo ayaga laftigooda ayaa mucaarad isku ah, macquulna maahan in ay dhahaan anagaa shir uqabaneyno beelaha, ayagoo weliba qirsan in uu jiro mucaarad ayaga ka soo horjeedo jiritaankooda, hadii aysan hor fariisan mucaaradka wax usoconaayo maleh wexeyna noqoneysaa jug jug meeshaada jog
Hadaba dibuhishiisiin ujeedadeedu tahay mid qabiil ma keeneyso xal siyaasadeed waana shimbirayahoow heesa hees wanaagsan heesa.
By:- Yoonis Aadan (Cigalley )
Faafin: SomaliTalk.com | July 12, 2007